Imaaraadka Carabta oo Dayax-gacmeed u diraya meeraha Mariikh | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee Carbeed ee loo dirayo meeraha Mariikh ama Farraare ee afka qalaad lagu yirahdo Mars ayaa lagu wadaa in hawada loo diro muddo toddobaadyo gudahood ah. Toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in Dayax-gacmeedkaasi lagu shubo shidaalkii ugu horreeyay.Safarka Dayax-gacmeedkan ayaa qaadan doono toddobo bilood oo uu ku jari doono masaafo dhan 493 milyan oo kiiloomitir, si uu u gaaro meerahaasi Mariikh isla markaana uu xaruntii laga gamay u soo diro xog muhiim ah oo ku saabsan cimilada iyo jawiga meerahaasi.
Dayax-gacmeedkan ayaa ku wareegi doono meerahani muddo 687 maalmood ah, si uu u soo uruuriyo xog ku filan oo ku saabsan macluumaadka meerahani Mariikh ama Farraare.Halkii wareeg oo Dayax-gacmeedkani uu ku soo wareego meerahani ayaa qaadanaya 55 saacadood. Agaasimaha barnaamijkan Imaaraadka, Sarah Al-Amiri, ayaa shalay sheegtay in mashruucani uu noqon doono mid dhiirigelin weyn u leh saynisyahannada Carbeed, si ay u daneeyaan farsamada qalabka ay cirbixiyeennadu isticmaalaan. Dayax-gacmeedkani oo lagu magacaabo Amal, ayaa 14-ka bisha Luuliyo lagu wadaa inuu ka duulo jasiiradda Tanegashima ee dalka Japan.
Dayax-gacmeedkan ayaa ka kooban saddex qeybood oo qeybta koowaad u jeeddadiisu tahay in lagu soo cabbiro waxa uu ka kooban yahay gibilka hawo ee meerahani, waxaana ku rakiban kaameero aad u awood badan. Qeybta labaad ayaa loogu talagalay in lagu ogaado cabbirka gibilka sare iyo kan hoose ee meerahani, waxaana qeybtani farsameeyay Jaamacadda gobolka Arizona ee dalka Mareykanka. Halka qeybta saddexaad loogu talagalay in lagu soo cabbiro heerka curiyeyaasha kala ah Ogsajiinka iyo Haydaroojin ee meerahani. Al-Amiri ayaa sheegtay in muhiimadda daraasaddoodu ay tahay sidii xog muhiim ah looga heli lahaa labadani curiye ee biyuhu ka sameysmaan iyo sida looga helo meerahani Mariikh. Dowladda Imaaraadka ayaa horey mid ka mid ah cirbixiyeennadeeda u dirtay xarunta cirbixiyeennada adduunka ee ku taal hawada sare.
Amiir Suldaan Bin Salmaan Al-Sacuud oo u dhashay dalka Sucuudi Carabiya ayaa ahaa cirbixiyeenkii Carbeed ee ugu horreeyay ee u dalxiis tago hawada sare, waxa uuna sanadkii 1985 raacay dayax-gacmeed laga leeyahay dalka Mareykanka. Dayax-gacmeedkan Amal ayaa lagu sameeyay dalka Imaaraadka Carabta waxaase markab lagu geeyay dalka Japan, halkaasi oo dhammaan injineeradii farsameynayay ay ku khasbanaadeen in la karantiilo sababo la xiriira cudurka Covid-19, arrintaasi oo halis gelisay in duulimaadka Dayax-gacmeedkaasi uu ka daaho xilligii loogu tala galay. Monica Grady, oo ah bare-sare oo ku takhasusay culuunta hawada sare isla markaana ka tirsan Jaamacadda Open University ee dalka Britain ayaa rumeysan in safarkani Imaaraadku uu muhiimad gaar ah u leeyahay dunida maadaama horey safarrada noocani ah ay u badnaayeen quwadaha waaweyn ee caalamka ee sida Mareykanka iyo Shiinaha.
Hoggaamiyaasha mashruucani Imaaraadka Carabta waxay xasuusiyeen dunida in siddeed qarni ka hor, khubaro Carbeed ay safka hore kaga jireen cilmi-baarista dhanka Sayniska ee lagu ogaanayay waxyaabo badan dunida oo dhan. Sidaa awgeedna maanta, amiirka Jasiiradda Dubai oo ka mid ah toddobada imaaradood ee ay ka kooban tahay Imaaraatka Carabta, uu rajeynayaa in mashruucani uu horseedi doono in uu soo nooleeyo dareen iyo hanka Carbeed isla markaana uu gobolka ka caawin doono sidii looga tabaabusheysan lahaa dhaqaalaha ku xiran saliidda oo kaliya. Ujeeddada safarkan ayaa ah in Dayax-gacmeedkan uu gaarto meerahaasi Mariikh 50 sano guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay dalkasi Imaaraadka Carabta sanadkii 1971, waxaana dalkaasi qaniga ahi uu ballan qaaday in meerahaasi uu ka dhisi doono deegaan uu bani’aadamka ku noolaan karayo meesha lagu gaaro sanadka 2117
Tags: Imaaraadka Carabta oo Dayax-gacmeed u diraya meeraha Mariikh
Next post How Somali Music Was Ignited?
Previous post Biyo laga helay meere "la degi karo" markii ugu horeysay